Accueil > Gazetin'ny nosy > Ben’ny tanànan’Antananarivo : Tsy mbola manana kandida ny IRD-MAPAR
Taorian’ny fifidianana depiote teo dia ny fanavaozana an’ireo olom-boafidy mitantana ny kaominina sy ny mandrafitra ny Antenimieran’ny tanàna no hirosoana amin’ny alalan’ny fifidianana indray izao. Ny vaninandro voatondro hanaovana izany fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsainan’ny tanàna izany dia ny faha-20 oktobra. Efa mibanjina ny ho amin’izany ny any anivon’ny etamazaoron’ny antoko pôlitika isanisany any.
Ho an’Antananarivo Renivohitra dia nangatahin’ny zaikaben’ny antoko Tim hirotsaka hofidiana ho ben’ny tanàna eto Ingahy Ravalomanana.
Na Ravalomanana Marc na Rtoa Rakotonirainy Ravalomanana Lalao ihany no hirotsaka, na olon-kafa, dia tsapa fa mety ho taolana ho an’ny antoko na ny vondron-kery miara-dia amin’ny fitondrana no handresy azy, indrindra raha tarafina ny voka-pifidianana depiote farany teo.
Etsy ankilany, tsinjon’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena fa tsy manana olona mahafeno ny fepetra takian’izany ho ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra izany ny IRD-Mapar. Tsy tokony hadinoina fa manana ny lanjany manokana amin’ny fitantanana ny firenena ny renovohitr’Antananarivo, indrindra koa fa hatramin’izay dia tsy nahavoasarika an’Antananarivo Renivohitra loatra ny nifidy olona miara-dia amin’ny fitondrana foibe eto.
Raha ny marina, misy ny olona afaka mitantana an’Antananarivo Renivohitra, ary tian’ny vahoakan’Antananarivo, mahafantatra an’Antananarivo tsara koa sady manana vahaolana hoenti-manarina sy mampivoatra ary mampandroso an’Antananarivo, saingy ho tsapan’ny filohampirenena ve ny lanjany satria tsy miara-misaika amin’ny Tgv na amin’ny Mapar na amin’ny IRD?
Fahafaham-baraka ho an’ny fitondram-panjakana anefa raha toa ka hifanalavitra be amin’ny vato ho azon’ny kandidan’ny Tim no ho azon’izay hatolotry ny antokom-pitondrana foibe. Afaka miandrandra fandresena eto anefa ny IRD na Mapar raha mahay mifantina an’izay olona tena mahomby sy tian’Antananarivo satria mahafeno ny fepetra takian’ny fanarenana an’Antananarivo.